अचम्मको ठाँउः जहाँ आफ्नै बाबुसँग गराइन्छ छोरीको बिहे ! | अचम्मको ठाँउः जहाँ आफ्नै बाबुसँग गराइन्छ छोरीको बिहे ! – हिपमत
विश्वमा बिभिन्न जातजाती तथा समुदाय छन् । उनीहरुका आ–आफ्नो चलन तथा रीतिरिवाज पनि छन् । दुनियामा कतिपय यस्ता परम्परा हुन्छन् जसका बारेमा सुन्दैमा निकै अप्ठेरो महसुस हुन्छ र लज्जाबोध पनि हुन्छ । कतिपय समुदायमा सुन्दा पत्याउनै नसकिने कुरीतिहरु अझै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । सायद आफ्नै बुवासँग कुनै पनि महिलाको बिहे हुने भन्ने कुरा सोँच्न पनि नसकिने कुरा हो ।
यस्तै एउटा रोचक प्रचलन बंगलादेशमा अझै रहेको बताइन्छ । जहाँ आफ्नै बाबुसँग छोरीको बिहे गराइन्छ । एक समुदायमा छोरीहरुलाई सानै उमेरमै आफ्नै बुवासँग बिहे हुने कुरा बताइन्छ र आफ्नै बाउसँग बिहे भएको सपना देखाइन्छ ।
त्यहाँको मण्डी जातिमा प्रचलित बाउले आफ्नै छोरीसँग बिहे गर्ने कु’प्रथा रहेको छ । यो समुदायमा अर्को प्रथा पनि रहेको छ । यदि कुनै महिलाको बिहे भएको छोटो समयमै लोग्नेको मृ’त्यु भएमा विधवा महिलाले लोग्नेका परिवारका कुनै पुरुष सदस्सँगै बिहे गर्नुपर्दछ ।